Igwe ojii igwe ojii + Amazon Key: njikọta zuru oke | Akụkọ akụrụngwa
Igwe ojii igwe ojii + Amazon Key: nchikota zuru oke
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa nke Amazon, ị ga-ahụla ntakịrị obere e-azụmahịa ibu na-abanye n'ime ndụ anyị, mana ọ bụghị dịka Google na-anwa ịmatakwu banyere anyị, mana ka gbalịa ịkwado ụbọchị anyị taa. Themụ okorobịa si Jeff Bezos ewepụtara Amazon Cloud Cam, igwefoto na-enye anyị ohere ịmara mgbe niile ihe na-eme n'ụlọ anyị na nke na-enyekwa anyị ohere ịchekwa ndekọ niile na igwe ojii, ezigbo iji nwee ike ịnweta data site Ndekọ. Mana ọ bụghị naanị ọrụ Amazon Cloud Cam na-enye anyị.
Igwe ojii igwe ojii nwere ike jikọọ na anyị smart mkpọchi, nke mere na mgbe ọ bụla anyị nyere ikike ịbanye n'ụlọ anyị, anyị ga-enweta ihe onyonyo n'aka anyị. Mkpọchi Smart na-enye anyị ohere inye ohere ịbanye n'ụlọ anyị site na ekwentị anyị, iji mezie nrụzi, hichaa ụlọ ... Anyị nwere ike ịkwụsị ịnweta otu ojiji, iji oge ụfọdụ ma ọ bụ iji oke na ihu igwe. Na mgbakwunye, mgbe anyị na-eche nzụta n'aka Amazon na anyị maara na anyị agaghị anọ n'ụlọ, anyị nwere ike ịnye tupu oge eruo, nweta nnyefe ka e nwee ike ịhapụ ngwugwu n'ụlọ.
Amazon Cloud Cam na-enye anyị a Full HD mkpebi, Ezubere maka ime ụlọ, ọhụụ abalị, onye na-ahụ ihe mmegharị na ụda ụzọ abụọ, ka anyị wee nwee ike ịgwa onye ahụ anyị hapụrụ ka anyị bata n’ụlọ anyị, ọ bụrụ na ọ dị otú ahụ. Dịka m kwuru n'elu, ọrụ nchekwa nke Amazon na-enye anyị ohere ịdekọ onyonyo site na igwefoto atọ na oge ma chekwaa ha n'igwe ojii n'efu site na awa 3 gara aga. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa ogologo, anyị ga-aga site na ndenye ọpụpụ ma kwụọ ụgwọ n'etiti 24 na 7 dollar kwa ọnwa.
Igwefoto a dakọtara na Amazon's Alexa. Ọ bụrụ na anyị nwekwara Amazon ikwughachi Gosi, na ngwaọrụ na integrated 7-anụ ọhịa ihuenyo, anyị nwere ikeEnwere ohere site na ngwaọrụ gaa na ndekọ niile, ohere nke anyị nwekwara site na ekwentị anyị. Ọnụahịa nke igwefoto bụ $ 120, ọnụahịa karịa gbanwee ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere igwe foto dị mma dị ugbu a na ahịa ma ọnụahịa ya anaghị ada n'okpuru $ 150 maka ụdị nwere obere atụmatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Igwe ojii igwe ojii + Amazon Key: nchikota zuru oke
Sony A7R III, enyo ọhụụ na megapixels iri anọ na anọ na vidiyo vidiyo 42K
Nest Cam IQ Ime ụlọ